Eriri eriri ahụ o kwesịrị ya? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Nnukwu eriri 2.0 nyocha - mkpebi bara uru
Nnukwu eriri 2.0 nyocha - mkpebi bara uru
Eriri eriri ahụ o kwesịrị ya?
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-egwu egwu na-edekọ ụda obi gị n'oge mgbatị, achọpụtara m nke ahụAHOPziri ezi karịa ndị ọzọ m nwara. Mgbe m na-enyocha aka obi m ugboro abụọ na aka, m na-apụtakarị na ọnụ ọgụgụ ahụ eriri ahụ na-atụ, enweghịkwa m nsogbu ọ bụla na ọsụsọ ma ọ bụ mmegharị na-emetụta agụ ihe mmetụta.
Anọ m na-eji teepu swoop a kwa ụbọchị ihe karịrị ọnwa atọ na isiokwu a bụ mkpebi ikpeazụ m na echiche ikpeazụ banyere ma m ga-ahọrọ ime akwa ahụ kwa ụbọchị ma ọ bụ laghachi na apụl m. Lelee Ndewo, Abụ m Jaden Feddock na ọwa a bụ 10 nke 10 na-esote nkeji maka egwuregwu, ahụike na teknụzụ. Aga m ekwu okwu banyere onye a Whoop-Strap 3.0 na ise n'ime ihe m chere na ọ bụ nnukwu akwa, gbakwunye ihe ise m chere ga-eme ka ọ dịwanye mma n'ụzọ zuru oke, mana nke mbụ bụ oge maka mụ na m Obi dị m ezigbo ụtọ ịkpọsa na ọwa a dị nso na ebumnuche ya nke ndị debanyere aha 1,000.
Echere m na ndagwurugwu a ga-abụ ụzọ magburu onwe ya iji mee ka anyị gafee ugwu ahụ, ugbu a ọ ga - arụ ọrụ njikọ m na - ezigara m na isiokwu m ikpeazụ ị nwere ike ịhụ na ejirila oge 25 nke bụ onye nweere onwe ya ihe karịrị afọ abụọ kwekọrọ na njikọ nke edemede a ka ị wee nwee ike irite uru site na uru ndị a, ihe niile ị ga - eme iji sonye bụ ịdenye aha na ọwa a. Dị ka isiokwu a ma kesaa ya na mgbasa ozi ọ bụla ị họọrọ Twitter Facebook Instagram Instagram ihe ọ bụla ịchọrọ iji. Echefula ịhapụ okwu na edemede a.
Mee ka m mara na ị banyere raffle ahụ ma tinye aha njirimara gị na mgbasa ozi mgbasa ozi a ka anyị wee nwee ike nyochaa òkè na nkọwa a kwa, Ihe mere i ji chee na Whoop bụ ngwaọrụ magburu onwe ya maka gị na ihe kpatara ị ji enwe ya, yabụ zuru oke nke ahụ. Ka anyị kwuo maka whoop na ihe ise m chere mere ka ọ bụrụ nnukwu weara ngwaọrụ, nnukwu ọrụ nke ịchọpụta egwuregwu ị na-egwu na-akpaghị aka, ọrụ ị na-eme, na mgbe mbụ ị rutere ebe ahụ Ọ bụrụ na ị na-egwu egwuregwu ụfọdụ dị ka tenis, pickleball ma ọ bụ ihe yiri nke ahụ, ọ na-amalite na akpaghị aka. Aghọtara m na egwuregwu dabere na mmegharị gị ma echere m na ọ dị mma inwe ike ịmalite ma kwụsị mgbatị gị n'oge kwesịrị ekwesị.
Ekwesịrị m ime mgbanwe ole na ole na mmalite na oge nkwụsị, mana enweghị ịgbanwe ọrụ ahụ ọ batara nwere ike ọ gaghị adị maka onye ọ bụla, mana na ahụmịhe m ọ mere ezigbo ọrụ na nke ahụ. Whoop na-agbakwunye egwuregwu ọhụrụ oge niile iji mee ka ọ dịrị gị mfe ịmata egwuregwu ndị ịchọrọ igwu egwu Ya mere, n'eziokwu, Pickleball na Crossfit ka agbakwunyela na ọnwa ole na ole gara aga m na-anwale Whoop. Ihe nke a pụtara nye m bụ na ndị otu ahụ gbadoro anya na ime ka onye ọ bụla dị ka o kwere mee maka onye ọ bụla ma weta ọbụna egwuregwu ndị ọzọ na ngwakọta. Nke a ga-amasị m iji obi ụtọ gwa ụfọdụ ndị na-ekwu okwu na edemede m gara aga bụ ndị nyeere aka n'ezie Aghọtara m otú onye nrụgide nrụgide si arụ ọrụ site na itinye ụfọdụ nchekasị na ọ bụchaghị otu akara aha ahụ gbakwunyere na nrụgide gị niile maka ụbọchị ahụ .Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ya ugbu a, m ga-agụ ụfọdụ n'ime ihe ndị a site na n'isiokwu gara aga Amaghị m ihe niile gbasara ya, mana enwere m ekele maka nchọta ha, nke na-enyere m aka ịghọta ihe kpatara ọnụọgụgụ ndị a ji dị, etinyela otu n'ime ihe kpatara nsogbu ị chọrọ itinye iji si na 14 gaa a 16 abụghị otu dị ka nje na ị ga-agbakwunye na-aga site a 10 ka a 12 naanị n'ihi na a ngụkọta ibu bụ logari thermal, dị ka m gwara, nke ọma.
Ihe nke abuo m huru n'anya banyere Whoop nke na eme ya ihe di nma bu ihe nlere anya ura, nke m kwuru banyere ya ugbua n'isiokwu ikpeazu m, ma enwere m ike ma oburu na i gbaliri icho ura gi - kwa na nke a - nkasi obi na obi iru ala mmachi mara mma. Inwe uzo di uto nke oma na eme nnukwu ihe di iche ya mere na aghaghi m ichegbu onwe m banyere iru ura na ndi mmadu na-ehi ura. Otu n'ime ihe kachasị amasị m nke ụra na-ehi ụra n'ozuzu ya bụ ịghọta usoro nke oge.
Ya mere enwere m ike ịga webụsaịtị weebụ nke whoop iji hụ ihe usoro ndị a dị ka ogologo oge, ọ bụghị naanị obere ngwa na-ebufe anyị. Ya mere agbalịrị m ilele usoro ndị a iji hụ ma enwere ike ịnwe ebe m ga-ehi ụra n'oge gara aga, teta n'oge ọzọ iji meziwanye mgbake m n'abalị dị iche iche, echekwara m na ọ bara uru ịhụ usoro ndị a karịa oge o nyeere m aka imeziwanye onwe m mgbe m na-ehi ụra. Mee ka nguzosi ike ahụ dị mma ma m na-aja onwe m mma maka inye aka na nke a.
Ugbu a ihe nke atọ na ndepụta a bụ mgbasa ozi HR. Ihe mere m ji tinye nke a na ndepụta bụ n'ihi na mmemme na egwuregwu na ihe ndị ọzọ bụ ihe kpatara na ị nwere uwe ejiji na mbu. Ya mere, ọ bụ nnukwu ihe iji zipu nkuzi ịgba ịnyịnya ígwè gị iji zwift ma ọ bụ ziga ụfọdụ na Strava ka ọ na-agba ọsọ iji zere usoro ọzọ nke itinye eriri obi ma jikọta ya mgbe ị na-eme mgbatị ahụ ọzọ, ihe nke anọ na ndepụta a bụ ihe na-atọ ụtọ ma Aghọtara m na ọ gaghị abara onye ọ bụla uru, mana maka na anaghị m achọ ịma ọkwa na nkwojiaka m ụbọchị niile bụ n'ezie uru, yabụ ihe dị iche bụ apụl na-ele anya na onye ahụ, ebe onye ọ bụla na-anọdụ ala na-enweghị aka na nkwojiaka gị ụbọchị niile nke ahụ nwere obiọma nke dị mma ma ọ dị mma inwe ike itinye uche na ọrụ.
Nọgidenụ na nke a ma ị gaghị echegbu onwe gị gbasara ọkwa ndị ahụ ma ọ bụ ọnwụnwa ahụ, ugbu a amaara m na m nwere ike gbanyụọ ọkwa ahụ na Apple Watch m, nke ahụ abụghị ihe m na-ekwu, isi ya bụ na enwere m ike ịme na-enweghị ha Ikike ida ọnwụnwa ịla n'iyi na amamọkwa mgbe m kwesiri ịrụ ọrụ yabụ nke a bụ ihe adịghị mkpa, ịkwesighi ikwenye, mana o mere ya na ndepụta ahụ. Nke ikpeazu na ndepụta maka abamuru nke onye na-akwa akwa bụ uwe dị mfe na ịdị mma. Eriri n'onwe ya dị ezigbo mma ma echere m na elu nke nso a mgbaaka mgbaaka dị ka mgbaaka nwere ntụsara ahụ.
Eriri dị fechaa na-eme nnukwu ihe dị iche, ọ bụ ihe na-erughị ọkara nke Apple Apple ochie m, ọ na-eweta nnukwu ihe dị iche mgbe m na-achọ ịgbaso. na-ehi ụra mgbe ị na-agbalị ịdekọ mgbatị ahụ na echere m na nke ahụ bụ nnukwu gbakwunyere na o kwesịrị ịnọ na ndepụta atụmatụ kacha mma nke Whoop. Ebe ọ bụ na akwadoghị isiokwu a, enwere m ike ikwu maka ihe ọ bụla m chọrọ ịgụnye ihe ọjọọ na ọghọm niile m chere na-egbutu ntakịrị na nke zuru oke, ma ọ bụ nke kachasị mma, wearable na ahịa.
Ihe mbụ dị na ndepụta a bụ ihe a na-ahụkarị dị ka nkatọ banyere onye na-anụ ọkụ n'obi na ahụrụ m ya na nkọwa na DMs na ihe ndị ọzọ mana n'eziokwu enweghị ngosipụta nke na-agwaghị gị oge ma ọ bụ ọnọdụ batrị bụ ụdị ihe nwute. Nwere ike ịlele batrị site na ịpị ugboro abụọ. dee na-achọ onwe ya mana ọ bụ naanị ọkụ ole na ole ka ọ dị mma, ọ zughi oke mana echere m na ha na-echekwa ọtụtụ batrị site na itinyeghị ngosipụta yabụ gbalịa ime nke ahụ ntakịrị, ọ bụ ezie na m ga-asị nke ahụ bụ ọnụ ọgụgụ Otu ọghọm ka ya onwe ya bụ na ọ bụ naanị a wearable.
Ọ bụ naanị teepu nke na - egosi ọnụọgụ obi gị na oge ma ọ bara uru maka ọtụtụ nyocha na atụmatụ ị nwetara na oge awa ahụ, mana enweghị njirimara dị mma. Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ ma ọ bụ na-eme ihe yiri nke ahụ, ọ baghị uru dị ka ụfọdụ ihe dịka Apple Watch maka ụfọdụ mgbatị ahụ ma ọ bụ ọbụlagodi maka ọrụ ụlọ kwa ụbọchị mgbe m bidoro iyi onye Whoop ma e jiri ya tụnyere Apple Watch Eleghị anya m nwere iri na abuo Nyocha ugboro ugboro n'ụbọchị naanị na-eche echiche Aga m ahụ oge ma ọ bụ ọkwa ma ọ bụ ihe yiri ya. O were m ntakịrị oge na m ga-asị na m ga-ahụ n'anya ịhụ ya ma ọ dịkarịa ala na Whoop Strap 4 ihe nwere ike ịgwa m mgbe ma ọ bụ mgbe m ga-eme otu mgbatị ahụ, oge m, ihe ọ bụla bara uru n'oge na mgbe M na-ekwu maka ịgba ọsọ nke na-ewetara m isi nke abụọ anaghị amasị m banyere onye ọ bụla bụ na ọ naghị arụ ọrụ nwere GPS gụnyere, nke pụtara na ọ bụrụ na m chọrọ ịga gbaa ọsọ wee pụọ n'ọnụ ụzọ m na-enwe ike ijide Apple Watch na akpụkpọ ụkwụ m na m Pod Pod na m nọ n'ọnụ ụzọ, mana onye ọ bụla ịchọrọ ijide n'aka na ị wetara smartphone gị n'ihi na nke ahụ bụ ihe nsuso GPS jikọtara.
Yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ map dị egwu na strava mgbe ị gachara ọsọ gị, nke m na-eme, obi ga-adị m ụtọ ile map ahụ ma tinye ya na ya. na n'ime mmega ahụ m na-edekọ ya ka GPS wee ghara itinye ya na wearable na-eme ya ka m wee nwee nke a 'Ọ bụ nnukwu ihe maka m na enweghị m ike ịpụ na elekere m na-agba ọsọ na AirPods n'ihi na ọ bụ nọmba atọ na ndepụta a na-atọkwa ụtọ n'ihi na ọ bụ na ndepụta m dị mma mgbe m mere nyocha mbụ m ọnwa atọ gara aga na nke ahụ bụ ịkwụ ụgwọ ahụ, ya mere, ihe ọhụrụ nke inwe batrị na-akwụ ụgwọ na ị nwere ike ịdọrọ na onye na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-eme ihe ọ bụla ị chọrọ ime dị ukwuu na m na-eji ya a otutu n'ihi na m nwere ike ikwu ya mgbe m na-arụ ọrụ. ma ọ bụ naanị nọdụ na tebụl m na ọ naghị eme ọtụtụ ihe dị iche, mana batrị n'onwe ya na-ejide ihe zuru ezu maka otu ụgwọ 100 na oge ụfọdụ ma ọ bụrụ na ọ ga-apụ nwa oge, ọ ga-efunahụ ụgwọ ahụ karịa oge, yabụ mgbe ọ bụla m mere M tinyere batrị teepu ma m ga-ahapụ ya ruo ogologo oge.
M ga-asị na mgbe ụfọdụ ọ na-adị ka ọtụtụ awa nọ ọdụ ebe ahụ na-eche ka ọ kwụọ ụgwọ. Yabụ ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ idozighi ụzọ dị mma iji bulie elu, ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa bụ ihe dị ala, mana ihe ọhụụ na mma dị mma, ọ na-ewe ogologo oge ịkwụ ụgwọ, ọ na-ewe ụgwọ 100 naanị. Yabụ ọ bụrụ na ị na-eji elekere gị mgbe ị na-achọ ịkwụ ụgwọ ya, ọ gaghị akwụ ụgwọ ihe ọ bụla na 100 nke ahụ bụ ihe m hụrụ.
Mee ka m mara na nkwupụta ma ọ bụrụ na nke a dị iche na gị, mana nke ahụ bụ otu n'ime mkpesa m kachasị. Ya mere, mgbe m nyochachara nke mbụ, enwetara m nkọwa banyere igwu mmiri na otu onye na-egwu mmiri na otu ị si egwu ya na ya ma ị na-egwu mmiri ọ bụla ụdị mgbatị ahụ ma ọ bụ na ị ga-eme usoro ndị ọzọ siri ike nke na whoop band ahụ ga-atụgharị mgbe ọ na-achọ igwu mmiri, enwere m Ọ bụrụ na eriri a dị mma ma ọ bụ na ọ bụghị oke uko, ọ ga-ada mgbe ị na-egwu mmiri na nke ahụ nwere ike bụrụ enweghị obi ụtọ na ahụ erughị ala mgbe ị na-achọ ịtọlite rụpụta.
Enwere ngwọta na nke a na Whoops na-ere hydroband 12 n'otu ngwugwu abụọ ị nwere ike ịmịpụ onye ahụ n'onwe ya wee were ụfọdụ silicone kpuchie ya ka ọ nọrọ ebe mgbe ị na-anwa igwu mmiri, mana ị nwere ihe ndị ọzọ na na ịkwụ ụgwọ maka otu egwu egwu ma tinye ha n'ihu mmiri bụ ọzọ nsogbu nke m chere na ọ na-emebi ahụmịhe zuru oke. Ọ dị mma ihe ikpeazụ na ndepụta ọjọọ bụ 100 otu ndị akwụ ụgwọ maka onye mebiri emebi ugbu a. Otu a na-azụta ya na ndị otu ya ma ị na-enweta ya n'efu ma ọ bụrụ na ị na-eji njikọ na otu n'ime isiokwu m maka onye ị nwere ike nweta ọnwa mbụ n'efu yana Get straps for free mana kwa ọnwa mgbe nke ahụ gasịrị, ị ga-akwụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ dollar iri atọ maka ịbụ onye na ụbọchị ha nwere ike ịdebe otu ahụ ma ọ bụrụ na ịnweghị idebe otu mana ihe niile bara uru nye onye ahụ bụ ibu, mgbake na ọnụọgụ niile na-eso ndị otu ahụ, ugbu a ka m ghọtara na ha na-erite uru nke ntinye otu ha wee nwee ike ịkwụ ụgwọ maka nchekwa ha na algọridim na-agbakọ nkọwa ndị a niile dị mkpa site na mgbatị gị na data ahụike, mana mgbe Ekwesịrị m ịhọrọ, echere m na m ga-akwụ ụgwọ tupu oge eruo, yabụ yiri nke Apple Watch ma ọ bụ Garmin ma ọ bụ Fitbit na enwere m ike iji ya ogologo oge m chọrọ.
Ikekwe ọ bụ naanị ihe gbasara uche, mana ịnwe onye otu ị maara na ị ga-akwụ ụgwọ oge na-esiri ike ịkọwa, ihe ọ bụla dị ka nke ahụ, mana hey mgbe ị na-achọghị ịkwụ ụgwọ ego gị na na ọ bụrụ na ịchọrọ iji nata ya n'efu dabere na njikọta ozi njikọ, echefula isonye na raffle e njikọ njikọ gị na nkọwapụta nke edemede a ma jiri ya mee ihe, yabụ lelee ya. Ya mere, onye ọ bụla na-aga n'ihu iji dị ka ahụike m kwa ụbọchị maka ndị ọkwọ ụgbọala, azịza m bụ mba. Onwe m, echere m na Apple Watch nwere ọtụtụ elele nke m na-agaghị enweta na onye ọ bụla ma ọ bụrụ na m bụ onye egwuregwu kachasị elu, nke m ga-achọ ka m bụrụ ọkachamara n'egwuregwu ọkachamara bụ onye bu n'obi n'ezie ịnweta otu ma ọ bụ abụọ ikpeazụ kwa ụbọchị pasent abụọ iji jide n'aka na m nwere ahụ ike kachasị mma na algọridim na nyocha nke mgbatị gị, mana dịka onye na-anụ ahụ ike karịa nke m na Apple Watch na-enye gị ozi ndị ọzọ na mgbatị ahụ, ị ​​nwere ike ịhọrọ mgbatị ahụ ma hụ nha nha gị Gwuo ahihia gi na anya gi.
My pro igwu mmiri bụ oké ụzọ na-eme nke a mgbe atụmatụ ndị a na-ahụmahụ na-esonụ larịị ndị a ngwa ọdịnala na m na-eche na m nwere a mma wearable na ọ bụghị nanị na-enye m ohere iji soro m mma oge, kamakwa Ugbu a, ịba uru ihe m ga-ahọrọ karịa Apple Watch. Ugbu a, m ga-ekwu dị ka ọkwa ma ọ bụrụ na ị ka na-ele isiokwu a. Buru n'uche na ọ bụrụ na ejiri m ihe gbasara ahụike, enwere okwu dị iche iche maka onye ọ bụla, ọ nwere ike ịdị iche na onye bụ ọkachamara n'ịgba egwuregwu nwere ike ịchọ ọrụ na ọrụ dị iche iche iji mee ihe ọ na-eme.
Onye ọ bụla ga-agbaso otu nke a si arụ ọrụ, mana echere m na m ga na-eji Apple Watch ma ọ bụrụ na m rute n'ọkwa ahụ, enwere ike m ga-alaghachi na onye ọ bụla. Daalụ maka ikiri edemede ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ akụkọ ndị ọzọ gbasara onye ahụ n'onwe ya. My echiche m mere nke a playlist na m chere na ị nwere ike na-amasị.
ebee ka eji eme njem igwe
Ọ bụrụ na ị hụrụ egwuregwu, ahụike, na teknụzụ n'anya, chọọkwa ịmatakwu ọdịnaya m, ị nwere ike ịlele ya ebe a. Pịa ebe a. Echere m na isiokwu ahụ masịrị gị.
Ezi ụbọchị Daalụ!
Bụ whoop kacha mma mgbatị ahụ?
Iji bido, echere m na nke a bụakwa ahuhu trackerna nlekota oru. M ga-asị na ọ na-anapụta n'ezie ịbụ otu ụlọ ahịa nkwụsị maka ọtụtụ nke gịmmana usoro ahụike. Enwere m ezigbo ihe siri ikemmana ihi ura ugbua naOnye nnochiemeghi ihe obula igbanwe stats ahu.
Onye dị mma karịa Fitbit?
Onye nnochibụ ihe kachasị mma naFitbit. Nweta ihe niileFitbitatụmatụ, na-elekwasị anya na mgbakekarịanaanị ịbanye data mgbatị na arụmọrụ. NaOnye nnochi3.0, ị ga-enweta ezigbo ntụsara ahụ, yana ọtụtụ data na oge ụra gị, ozi ọzụzụ, mgbake, na nsogbu kwa ụbọchị.Mar 2 2021
Nwere ike iji bandụ egwu na-enweghị ndị otu?
NaOnye nnochibụ ihe pụrụ iche ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ na-emegharị ahụ ike na nke ahụgịkwesịrị ịghọ asokajirieriri 3.0 na ngwa ahụ.Ị nwere ike'mee ka aotu- oge nzụta ijijiriya.Wa 11 2020
Ekele m unu, nabatanụ taa, anyị na-ekwu maka ụdọ Whoop 3.0 m jiri kemgbe izu abụọ gara aga. Ka anyị kwuo maka ụfọdụ ihe gara nke ọma yana ụfọdụ ihe enwere ike imeziwanye.
Ka anyị kwuo banyere dabara nke ọma. ma kwụsị ugbu a ma ọ bụrụ na ị hụrụ eriri a na-atọpụ onwe gị na edemede m izu ole na ole gara aga. Ọ bụrụ na ị hụbeghị ya, aga m akwado ka ị laghachi ma mee nke ahụ.
Aga m ejikọ ya n'otu ebe na ihuenyo ahụ, mana m na-eji mgbaaka Arctic kama ọla mgba onyx ojii nke bịara na mbụ Whoop 3.0, yabụ achọrọ m ịhụ ihe mgbaaka ọcha ahụ dị ka izu ole na ole, na N'ọdịnihu lee otu o si dị mgbe ọnwa ole na ole gachara, mana na mbido ọ malitere itiri. ou nwere ike ịsachasị teepu ndị a na ncha na mmiri, mana ọ bụ ntakịrị ihe ihere na ọcha na-acha ọcha adịteghị aka, ọ bụ waterproof na teepu na ihe mmetụta bụ waterproof a batrị anyị na-aga ikwu banyere cha na nkeji na nke a abụghị waterproof.
Cheta, mana ọ na-ekwu na ị nwere ike iji ya saa ahụ, ị ​​nwere ike iji ya maka igwu mmiri na ihe ọ bụla ịchọrọ, mana mgbe m jiri ya na ịsa ahụ maka ụbọchị ole na ole mbụ, ekpebiri m na m ga-apụ ịsa ahụ n'ọdịnihu n'ihi na eriri ahụ na-anọ mmiri ruo nwa oge mgbe ịmịchara mmiri, ọ na-adabara onwe ya mgbaaka a nke ọma enweghị m nsogbu ọ bụla yikwasị ya iji hie ụra ị na-eche na ọ dị, ọ dị mkpa karịa Apple Watch nke Echere m na ọ nwere nnukwu ọdịiche ma ọ bụrụ na ị na-eji ya kwa ụbọchị. ? ? ? ?? eme ihe omume n’egosiputa na ị naghị ahụta na ọ dị, dịka o siri dabara, m ga-ekwu na ọ magburu onwe ya na ọ bụ ihe m ga-akwado maka ya kpatara nke a, ị na-amataghị na ị na-eji ya, mgbe ị na-agagharị ụbọchị gị ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị na-emega ahụ amaara m na ọ bụ naanị izu abụọ mana eriri ya na njikọ aka gị siri ike nke ukwuu na ifelata adịghị mfe, ọ naghị ada, ị ga-enwerịrị nke a m chọrọ n'ezie iji wepụ ya ka ọ gbanye ya ma gbanyụọ ya, mana ọ bụ naanị izu abụọ ka ọ dị m mma na ọ bụrụ na nke a ga-aga n'ihu oge, mana ọ bụla nke ikpeazụ jidere nke ọma maka izu abụọ N'ime izu ole na ole mbụ mgbe ị nwetara eriri aka gị, a ga m asị na ịmalite ịgbatị onwe gị, ọkachasị ọ bụrụ na ị ga-ehi ụra ya, ị ga-ahụ na ihe dị ntakịrị ka ị na-ehi ụra, yabụ ị nwere ike ibuli mgbatị ahụ n'aka gị. ụbọchị ruo izu mbụ. Emere m nke a.
Ọ bụghị ihe ziri ezi oge mbụ m tinyere ya, mana ụbọchị ole na ole mbụ dịka ihe na-agagharị ga-eme ka ị ghọta ihe dị mma iji mee ka ihe mmetụta ahụ dị nso na nkwojiaka gị ma ọ bụghị nke siri ike, iji mebie nkasi obi nke mgbaaka n'onwe ya. Ugbu a, ka anyị kwuo maka ịgba ụgwọ. Egwuregwu na-ekpo ọkụ bụ otu n'ime akụkụ kachasị amasị m nke wearable a ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ.
Enwere ọtụtụ ndị nwere eriri ndị mara mma nke nwere ike itinye ozugbo na elekere n'onwe ya na-enweghị iwepụ ya, mana Whoop dị mma karịa ndị na-asọmpi ya n'echiche m dịka okwu ikpe a dị obere. Amaghị m ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịhụ ya ebe ahụ na ihuenyo ahụ, mana ọ na-adaba na-adaba na onye na-eme onwe ya ka ọ dị mfe na ị gaghị ewere ya na gị mgbe ị na-egwu mmiri ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ nwere ike ịme ya mmiri ka ị kpachara anya , ọ bụ ezie na enwere ike ịnwe obere ihe m nwere ike iwere mgbe m na-eme njem ma mara onye m ga-akwụ ụgwọ maka ihe dị ka otu izu na ikekwe ọbụna karịa dabere na ọrụ ahụ. Ma ọ dị ịtụnanya inwe ike ịkwụ ụgwọ na obere akpa akwa ahụ ma echere m na nke ahụ bụ nnukwu ihe ọhụrụ site na ndị ọrụ Whoop na enwere m obi ụtọ na ha bụ. '. fanye. ka anyị kwuo maka ihe mmetụta na izi ezi, yabụ ha kpọtụrụ aha na webụsaịtị ha na ha nọ n'ime iti kwa nkeji nke EKG ka ha wee kwuo na nyocha obi ha ziri ezi, yabụ na ọ na-abịakwute nkwojiaka m ọ na-abata n'uche obere ihe ikwere na ọ bụ nke a dị nso na EKG ebe a kwenyere ọtụtụ eriri obi ka ọ bụrụ ihe ziri ezi, mana ahụghị m ihe ọ bụla dị mkpa sitere na igbe m na nke m.
Mkpụrụ obi dị na nkwojiaka ka m na-emega ahụ, echere m na nke a nwere ike ịbụ nke ọma. Echere m na ọ dị mma. Otu n'ime akụkụ kachasị amasị m nke ihe mmetụta ahụ n'onwe ya bụ na ọ nwekwara ike ibunye obi gị ọnụego nke ahụ bụ ihe ụfọdụ ndị ọzọ nwere ike ịdabere na ihe nyocha obi nwere ike ime, mana mgbe m na-agba Zwift ma ọ bụ na-eme ụdị ọrụ ọzọ ebe obi m dị site na ngwaọrụ dị iche Ọ bụrụ na ịchọrọ ka a tụọ gị, ọ dị mfe site na Whoop na ọ bụ ihe ị nwere ike ijikọ, ma ọ bụ kọmputa igwe kwụ otu ebe gị, ma ọ bụ igwe ịgba ọsọ na njirimara ahụ, ma ọ bụ ọbụlagodi Zwift, ọ bụ ihe ị na-eme ma ọ bụ nnukwu Ọ bụrụ na nke a bụ izu mbụ gị, ị nwetarala bandop gị, ị na-eyi ya ugbu a Otu n'ime ihe mbụ ị hụrụ bụ ụbọchị ole na ole mbụ n’izu ma ọnwa mbụ gị na ọnwa gị na-amalite n’úkwù onwe ya na ngwa ahụ iji mụtakwuo banyere gị na ahụ gị, otu o si eme ka ọ dị ọhụrụ na otu o si eme mgbanwe na nrụgide nke mmemme mmega ahụ gị.
Ya mere buru n'uche na ọnụọgụ ahụ ezughị oke mgbe ị na-eji ngwa ahụ - a na-atụnyere ha na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ nọ n'otu ọgbọ gị ka ha were ndị ọgbọ gị n'ozuzu wee jiri ọnụ ọgụgụ ahụ chọpụta mkpebi gị na ntụrụndụ akara tụnyere nke mere na ha adabaghị otu. Ruo mgbe ị gafere nke mbụ nke mmezi, maka ụra, nke ahụ bụ ụbọchị anọ, yana maka igwe mmega ahụ, nke na-ewe ihe dị ka otu izu. Ga-eche n’izu a tupu ị nata nzaghachi gị.
Na-eche ihe dị ka ụbọchị 14 iji nweta akara ngosi izu, mana ị ga-echere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ọnwa iji nweta ụbọchị 30 zuru ezu kwa ọnwa mgbe ị nwere ike ịhụ usoro ndị ọzọ na otu ị si eme n'akụkụ ụfọdụ certainhapụ tingra, Mmega ahụ , Na Mmega Cheta na n'ime izu ole na ole mbụ ha ga-amụta ka ha na-ekwu maka akara mmega ahụ gị. Nke a gbagwojuru m anya n ’ihi na o siri ike nhịahụ ịghọta ihe nrụgide nrụgide dabara na ya. Mgbe ị na-emeghachi omume na ụfọdụ ọrụ, enwere ụfọdụ nrụgide anụ ahụ ị na-enweta kwa ụbọchị n'ozuzu ya na-agbakọ na ngwa ahụ, ma mgbe ị na-arụ ọrụ ọ na-agbakwunye ụfọdụ ibu na isi larịị ọ bụ ihe ole ka ịgbakwunye ma ọ bụrụ na ị chọrọ kpọmkwem na-agbalị ihe gị ọzụzụ na-ekwu na nke ahụ bụ ihe iburu n'uche, ma nọmba adịghị mma na m nwere ike ya ga-egosi gị foto ya na ngwa ahụ, mana ọ ga-egosi na ịkwesịrị ịgbakwunye otu ibu iji nweta akara zuru oke ịchọrọ, mana ọ gaghị abụ eziokwu mgbe niile ka m ga - anọ na Ihe a na - ekele bụ na ha nwere ndepụta mmekorita email, ụdị mkpọsa nke ha zipụrụ ntakịrị nkọwa gbasara whoop yana otu o si arụ ọrụ ugbu a kwa ụbọchị.
Ọ dị m ka ya bụrụ na m nwere edemede yiri nke a nke m gaara elele ngwa ngwa iji nweta isi nke otu o si arụ ọrụ yana ihe m kwesịrị ịtụ anya ime na izu ole na ole mbụ, mana ha zipụrụ nke ahụ ma ọ bara uru ịmara etu esi eweghachite gị. kwesịrị ịdị ka, ụdị ụdị mgbanwe mgbanwe mkpụrụ obi kwesịrị ịdị, na ihe ndị ị nwere ike ọ gaghị amata oge mbụ, ka anyị kwuo maka ngwa ugbu a, ngwa ahụ nwere ike ọ bụghị akụkụ kachasị amasị m nke Whoop. Ọ bụ ntakịrị aghụghọ iji ya na enwere ọtụtụ swipe wee pịa arụmọrụ nke ị na-agaghị aghọta nke ọma. Ya mere nzaghachi m maka gị na gị.
Iji bido na Whoop, pịa ihe niile ma swipe n'akụkụ ọ bụla iji chọta menu ezoro ezo na ubi ị na-amaghị. O were m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu izu iji chọpụta na mgbe ị na-aga o na ebe ihi ụra, ị ga-ahụ ụra gị ma e jiri ya tụnyere ihe ị kwesịrị ihi ụra na mgbe ịpịrị ya ị ga-enwetakwu ozi gbasara ogologo oge have nọrọla n'ụdị dị iche iche nke ụra. Amaghịdị m na nke a dị ruo mgbe m malitere ịpị bọtịnụ ọ bụla m nwere ike ịchọta.
Ya mere nkwanye m na ndị ọrụ bụ ịpị ihe niile wee mara ngwa ahụ. N'ụzọ ahụ, ndụmọdụ m nye ndị mmepe ngwa nwere ike ịmepụta otu n'ime ụzọ izizi mbụ ahụ ebe ịpịrị ụzọ gị na nke mbụ ya, ọ na-egosi gị menu nhọrọ ole na ole, ma ọ bụ na ọ nwere ike ịme ihe ka ọ pụta ìhè ka ị wee mara ebe ị nọ kwesịrị ịnyagharịa ihe ụfọdụ. Otu n'ime mkpesa kachasị na ngwaahịa a n'onwe ya bụ ndị nọ ugbu a mgbe m na-ekwu maka echiche ndị otu.
Amaara m na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aga n'akụkụ a n'ihi ya, ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka nkà na ụzụ iji ghọọ onye òtù nke mere na Strava ebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ atụmatụ ha niile m na-achọ ugbu a na-akwụ ụgwọ ahụ, mana m ga-asị na ọ bụ atụmatụ dị ike, ọ bụ ngwá ọrụ dị ike ma na-atụle na ha na-eme ọtụtụ nyocha ha banyere nrụgide gị na mgbake na sava nke ha M nwere ike ịghọta ihe kpatara nke a ji bụrụ otu. Otu mkpesa m nwere bụ na ịnweghị ọtụtụ. You nwere ike ọ bụghị naanị ịzụta ya na-atụ anya na-anọgide na-eji ya na ya ugbu a na steeti.
Dịka ọmụmaatụ, amaara m na m nwere Apple Watch Series 2 nke m ka na-eji, azụrụ m ya ma enwere m ya ma nwee ike iji ya. Ọ naghị akwado ya ruo mgbe ebighi ebi, mana ọ bụ ezie na ha ewepụtala ngwaọrụ ndị ga - eme n'ọdịnihu na usoro nke isii ugbu a. Ya mere, ọ bụ ihe nwute na ịghara inwe otu echiche ịzụrụ ya na ịnwe ya n'ezie, mana enwere m ekele maka nghọta niile ha na - enye ma echere m ya. ha na-emeziwanye ngwaahịa ha na njirimara onye ọrụ yana arụmọrụ na njirimara en zuru iji nye ikike ịnwe ndị otu mana ha na-enye azụmahịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ ọ bụla. Yabụ ọ bụrụ na ịzụta otu afọ, m ga-anwa ịzụrụ afọ gị na Black Friday ma ọ bụ ụfọdụ azụmahịa ndị ọzọ ama ama ka ị wee nwee ike ị nweta ego maka ego gị wee nweta afọ na ọnụahịa dị ọnụ ala karịa n'ihi na ọ dị oke ọnụ, mgbe ịzụrụ ya na ụdị ọnụahịa mkpọsa.
Ọ dị mma, nke ahụ bụ ihe m nwetara. Ọ bụrụ na ị nwere nzaghachi a biko egbula oge inye ya mkpịsị aka iji nyere ọwa a aka ma enwere m obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, hapụ okwu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ isiokwu ndị ga-eme n'ọdịnihu echefukwala ịdenye aha na ọwa. Daalụ maka ikiri na ịhụ gị ọzọ!
Ndi ruru $ 30 kwa ọnwa?
Eriri n'onwe ya bụ n'efu, mana ịchọrọ aOnye nnochiịbụ otu iji hụ uru. Ọ na-amalite mgbe$ 30makaọnwa, ma ọ bụ $ 18 kwaọnwaya na 18-ọnwankwa. Ma ọ dịkarịa ala otu elekerekwesịrịnke arụ ọrụ kwa ụbọchị-na-abụkarị ịgba ọsọ, ịgagharị, ịnyịnya ígwè, na yoga-Achọpụtara m na batrị Strap ahụ were ihe dị ka ụbọchị 5.Mar 16 2021
Gini mere ọjọọ ji dị njọ?
Na-Forcefed data kwa ụbọchị. Na n'ụdị ya ugbu a, ọnụọgụ data a karịrị, na-egbochi ma na-egbochi. Ọ bụghị naanị na ụfọdụ data ziri ezi na-enyo enyo (anyị ga-abanye na nke ahụ), ọ na-eri ahụ nke ukwuu ma na-eme ka ị jụọ onwe gị ezigbo ajụjụ mgbe ị ga - ejupụta na obi ike.Ọkt 20 2020
Ndi whoop dị mma karịa Apple Watch?
Ọ bụrụ na ịchọrọ otu ahụ ike,Onye nnochibụ ụzọ ịga nke ọma. Ọ bụrụ na ị chọrọ anchenwere ihu na ngwa,mgbe ahụ Apple Watchbụ ụzọ ịga. Maka mụ onwe m, agbachaghị m eyi nke mApple Watchọzọ.Eprel 9 2021
Nwere ike ịsa mmiri mmiri?
Can nwere ike ịsachagbalaga gi na ncha. Ọ bụrụgịna-eyiAHOPEriri naịsa ahụ, yipụ ya nasaampaghara nke akpụkpọ gị n'okpuru ihe mmetụta gị. Ọ bụrụgịAhụmahụ na-acha ọbara ọbara ma ọ bụ mgbakasị anụ ahụ, nweere onwe gị iyi eriri na ogwe aka ọzọ ka ị ghara ikpugheotuMpaghara. g.
Onwere ihe odi na nke whoop?
Offọdụ n’ime nnukwuOnye nnochina ndị asọmpi Oura - na-abụghị ibe ha - bụ: Fitbit - ha nwere ma trackers na smartwatches nke nwere ike inyere gị aka ịgbaso usoro ọrụ gị, ọnụọgụ obi, ụra, wdg. Ha bụ ezigbo asọmpi naOnye nnochieriri. Apple Watch - o doro anya na ị nụla banyere Apple Watch.
Ndi whoop dị mma maka ibuli ibu?
AHOPjikoro Nje dabere na mmepụta obi na oge ejiri dị n'ọtụtụ mpaghara obi. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eme aume- dabere na mgbatị na obere reps ma kewaa site na ogologo oge ezumike (dịkaEbuli elu n'egwuregwu Olympic), ị ga-enwe akara ala Nzọụkwụ dị ala.Ọkt 26 2020
Kedu ihe ị kwesịrị ịma banyere Whoop strap 2.0?
Kere - Whoop Strap 2.0, ọ bụ ngwaọrụ dị nfe wearable dị mfe nke na - ebu ibu yana ihe mmetụta ahụike na ahụ ike. Akpụkpọ ụkwụ Whoop nwere ụdị dị iche iche dị iche iche ma e jiri ya tụnyere nke anyị gosipụtara ebe a na weebụsaịtị anyị.
Ego ole ka batrị batrị batrị na-efu?
Ọ na-enye gị ngwa dị iche iche maka ahụ gị. Igwe batrị Whoop na-efu $ 50 nke kwesịrị ekwesị maka Strap 2.0 na Strap 3.0. Agbanyeghị na enweghị ike ibunye ya na adreesị APO / PO ọ bụla ma ọ bụ UAE. Ngwunye eriri maka nkwojiaka nwere ụdị dị iche iche na ọnụahịa ọnụahịa dị iche iche.
Kedu otu bandop 2.0 si arụ ọrụ maka mgbake?
Whoop na-eji Band 2.0 ya egwu iji gbakee gị. Ndi otu ahu choro ihe di nkpa banyere aru gi, gunyere: Whoop ga - eme data a niile site na algorithms iji mee ka ndi mmadu mara ihe na ntukwasi obi gi - ma obu ichota ma obu ichota. Kedu ka eriri 2.0 si arụ ọrụ?
Ajụjụ Ndị Ọzọ Na Ụdị A
onye mmeri nke mmeri
Champion cyclist - azịza nye nsogbu
Kedu onye na-agba ịnyịnya ígwè kacha mma n'ụwa?
ịgba ígwè mgbe afọ 60 dị
Gba ọsọ na 60 afọ - otu esi ekpebi
O ruola afọ 60 ịgbara ịnyịnya ígwè? Sometimesgba ịnyịnya ígwè na-ewere mgbe ụfọdụ dị ka ụdị mmega ahụ na ọ enjoyụ nke naanị ụmụaka ma ọ bụ ndị kachasị ịnụ ọkụ n'obi na-egwu egwuregwu. Otú ọ dị, mgbe ị na-ekpochapụ ịgba ígwè, ọ bụ egwuregwu nke zuru oke maka onye ọ bụla, gụnyere ndị gaferela afọ 60!
igwe ike ịgba igwe
Metergba igwe ike igwe - ihe ngwọta ga-ekwe omume
Ndi igwe ike igwe eletrik bara uru? Ebe ike mita ike abughi ego, ha kwesiri itinye ego ha. Ezigbo onye nchịkwa nwere ike iji akara ike gị iji hụ na ọzụzụ gị na-eduga na ebumnuche doro anya. 19 сент. Chukwuemeka odumegwu ojukwu
na-agba ịnyịnya bib tights
Gba agba ịnyịnya - olee otu ị si edozi
Kedu ihe bụ egwuregwu kacha mma? Kacha mma eji edozi edozi enyocha - Men'sEndura Pro SL II Bibtights. Assos HabutightsMille S7 na-eche ihu. Castelli Nanoflex Pro 2 akwụkwọ akwa. Castelli Sorpasso RoS nwanyi bi tights. Rapha Promụ nwanyị Pro Team Winter bib tights. Assos Habu LaaLaLai_S7 nwanyi nke tights. Sportful Pro bib tights. Endura Xtract ebi ndụ. Ebumnuche ịzụta.
Cgba okirikiri aerodynamics - otu esi edozi ya
Kedu ka esi eji ikuku eme ikuku? Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-agba ọsọ na-eyikarị 'akpụkpọ ahụ' iji belata esemokwu. Ntughari esemokwu esighi na ihe karie nsogbu ikuku ikuku. N’elu okporo ụzọ dị larịị, ikuku na-ebugharị bụ ihe mgbochi kasịnụ nye ọsọ nke onye na-agba ígwè, na-aza pasent 70 ruo 90 nke nkwụsi ike a na-enwe mgbe a na-agbagharị.
omenala ịnyịnya ígwè
Egwuregwu ịgba ọsọ omenala - ihe ngwọta bara uru
Ebee ka m ga-enweta uwe ịgba ịnyịnya omenala?